Dr. Tint Swe's Writings: Taste types အရသာအမျိုးမျိုး
Taste types အရသာအမျိုးမျိုး
Jimmy Thi Ha ဖန်တာကြတော့ ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ ဆရာ။
Dr. Tint Swe အင်္ဂလိပ်လိုရော ဆေးစာမှာပါ အရသာမှာ ဖန်တာမရှိပါ။ စပ်တာမရှိပါ။ ငရုတ်သီးစပ်တာကို အင်္ဂလိပ်လို Hot ပူတယ်လို့သာခေါ်တယ်။ သူတို့မစားလို့ စပ်တယ်လို့ မခေါ်တတ်ကြတာလား။
အရသာကို လျှာမှာရှိတဲ့ Taste buds ခေါ်တဲ့ အဖုကလေးတွေကြောင့်သိရတယ်။ အထူးအာရုံခံ ငါးမျိုးဖြစ်တဲ့ အကြား၊ အမြင်၊ အထိအတွေ့၊ အနံ့နဲ့ အရသာထဲမှာ အရသာက အားအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ကွမ်းစားတာ၊ ဆေးဝါးသောက်တာ၊ ဗီတာမင်ချို့ယွင်းတာ၊ ဦးခေါင်းကိုထိခိုက်မိတာ၊ ဦးနှောက်အကျိတ်၊ ဓါတ်ကင်ခံရတာတွေကနေ အရသာနည်းတာ၊ မရတာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကွမ်းစားတဲ့လူက ချဉ်တာမကြိုက်ကြပဲ၊ တော်တော့စပ်တာကို မမှုပါ။
အငန်နဲ့ အချိုကို သိစေတာတွေကတော့ လျှာရဲ့ရှေ့ပိုင်းကနေ တာဝန်ယူတယ်။ အချဉ်ကို လျှာရဲ့ ဘေးနှစ်ဘက်က သိစေပြီး အခါးကိုတော့ လျှာရဲ့ နောက်ပိုင်းက လုပ်ပေးတယ်။ လူတွေ အရသာခံတာ မတူကြပါ။ မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေထက် အရသာသိတာ ပိုများတယ်။ တယောက်တည်မှာလည်း အသက်အရ အရသာခံတာပြောင်းတယ်။ သိပ်ငယ်စဉ်မှာ အရသာသိစေတဲ့ အဖုလေးတွက လျှာတခုထဲကနေမဟုတ်ဘဲ၊ ပါးစပ်ဘေးဘက်တွေနဲ့ အာခေါင်မှာလဲရှိလို့ ကလေးတွေ အပူမခံနိုင်၊ အစပ်မစားနိုင်ကြဘူး။
အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်အာရှနဲ့ တောင်အမေရိကက လူတွေ အလွန်ခံတွင်းတွေ့လှတဲ့ အစပ်အရသာကို အမေရိက၊ ဥရောပနဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ လုံးဝမစားကြပါ။ အရသာတမျိုးကို မခံစားတတ်ကြတဲ့သဘောဖြစ်မယ်။ Chili (Chilli) ငရုတ်သီးထဲမှာပါတဲ့ Capsaicinoids ဆိုတာက ပါးစပ်ကိုဖုံးနေတဲ့ အလွှာမှာရှိတဲ့ Receptor တွေကို သက်ရောက်စေတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာဟာ ပူလို့ရတဲ့ နာကျင်မှုနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်။ ပူလောင်တဲ့ ခံစားမှုရစေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ စပ်တဲ့အရသာလို့ မပြောဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရသာခံတဲ့အဖုကလေးတွေဟာ ချိုတာ၊ ငန်တာ၊ ချဉ်တာနဲ့ ခါးတာတွေကိုသာ ခံစားစေပြီး ပူလောင်တာကို ခံစားတဲ့ အထူးအဖုတွေမရှိဘူး။ ရိုးရိုး အာရုံကြောတွေကနေသာ ဒါကိုသိစေတယ်တဲ့။ ဒီအာရုံကြောတွေက စပ်တာကို ပူတယ်လို့ထင်တော့ ဦးနှောက်ကလဲ ပူတယ် ဖြစ်သွားရော။
ကြွက်တွေကိုစမ်းသပ်တော့ စပ်တဲ့အပူဆိုတာ Temperature hot အပူချိန်အပူနဲ့ မျိုးဗီဇတူတယ်လို့ သိရတယ်။ ကြက်တူရွေးကို ငရုတ်သီးကျွေးရတယ်။ ငှက်တွေကို ငရုတ်သီးက မစပ်စေဘူး။ လူဆိုရင် ပါးစပ်ထဲ မထည့်ခင်ကတည်းက ငရုတ်သီးဟာ ပူတယ်။ ငရုတ်သီးထိတဲ့နေရာ မှန်သမျှကို ပူစေတယ်။ အပူလောင်တယ်လို့ အင်္ဂလိပ်လိုသုံးတယ်။ ငရုတ်သီးအမျိုးမျိုးစားလို့ ချွေးထွက်တဲ့နေရာ မတူတာကို ကိုယ်ပိုင်သုတေသနအရ သိရတယ်။ ရွှေလံဘိုငရုတ်က ဂုတ်မှာချွေးထွက်တယ်။
ငရုတ်သီး၊ ချင်း (ဂျင်း)၊ ငရုတ်ကောင်းတွေက ဘာလို့ စပ်ကြသလဲ။ ပူစပ်အစာတွေထဲမှာ Capsaicin ပါတယ်။ ဒါကိုခံရတာက ပါးစပ်ထဲမှာရှိတဲ့ VR1 receptors အာရုံခံတွေနဲ့ သွားပေါင်းမယ်။ အာရုံခံ (နူရုန်) ဟာ ပြောင်းလဲသွားပြီး အာရုံခံသတင်းကို ပို့ပေးတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေက ငရုတ်သီး မထောင်းတတ်ရင် ချွေးမ မတော်ချင်ကြဘူးတဲ့။
ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ရဲ့အရသာဖြစ်တယ်။ တခြားဓါတ်ဆားတွေက ဒါထက်နည်းနည်းသာငန်တယ်။
သကြားစတာတွေကနေချိုတယ်။ အယ်လ်ဒီဟိုက်နဲ့ ကီတုန်းတွေကြောင့်ချိုတယ်။
Savouriness (Umami) အမွှေးအကြိုင်
အသားဓါတ်လိုဖြစ်သော၊ အရသာထူးတာကို နေရာအလိုက်ခေါ်တယ်။
False Coolness အအေးတု
အေးတယ်၊ လတ်ဆတ်တယ်။ ဥပမာ (မင်သော်) ပရုတ်အေး၊ (ကမ်ဖေါ်) ပရုတ်၊ (မက်သနောလ်)။
False heat အပူတု
Spiciness စပ်တဲ့အရသာကိုခေါ်တယ်။ Chili peppers ငရုပ်သီး၊ Black pepper ငရုတ်ကောင်း၊ Ethanol (အက်သနောလ်) နဲ့ Capsaicin (က်စပီစီယမ်) အရသာကိုခေါ်တယ်။
Astringency စူးရှသော၊ ပြင်းထန်သောအရသာ
Areca nut (betel nut) ကွမ်းသီးအရသာ
ကျွန်တော်တို့က ဖန်တယ်ဆိုတာ ကွမ်းသီးအရသာကိုပြောတာ။ ကွမ်းသီးထဲမှာ Arecoline (အရီကိုလင်း) ဓါတ်ပါတယ်။ သူက (ဘေ့စ် အယ်လ်ကာလွိုက်) ဖြစ်လို့ အက်စစ်နဲ့ပြောင်းပြန်။ အက်စစ်ကို ပူတယ်၊ စပ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။
Terminalia chebula ဖန်ခါးသီးအရသာ
Haritaki fruit လို့လည်းခေါ်တယ်။ အရသာအားလုံးထဲမှာ ငန်တာနဲ့ စူးရှပြင်းထန်တာကလွဲရင် ကျန်တဲ့အရသာတွေ စုပေါင်းထားတယ်လို့ ဘယဆေးပညာကဆိုတယ်။ ဝါးရင် ချိုလာတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်တယ်။
အောက်ဆုံးကအရသာတွေကို ကျွန်တော်ကထည့်တာပါ။ ပညာရှင်တွေကထည့်ထားတာ မတွေ့ဖူးသေးပါ။
Bloodstained July အစွန်းရောက်များ၏ ဇူလိုင်လ
Red Tape ဥက္ကဋ္ဌကြီး၏လမ်းညွှန်ချက်အရ
July Pledge ဇူလိုင်သန္နိဋ္ဌာန်
The Little Conspirator ပုန်ကန်သူလေး
Nasal Polyps နှာခေါင်းထဲ အသားပိုဖြစ်ခြင်း
Water Buffalo ဤလား ကျွဲလား
Donation box ပံ့သကူပစ္စည်း
Thai-Burma War ထိုင်း-မြန်မာစစ်ပွဲကြီး
Without Coffee ဆက်ပြီး ခက်နေတုန်း
Morning မောနင်း (သို့) ကော်ဖီမပါသေးတဲ့ခွက်
P57 Hoodia ဗိုက်အဆီချဆေးလားမသိ
GERD အချဉ်ရည် အထက်ဆန်ခြင်း
My humble wish for Media မီဒီယာသမားများအတွက် ဆုတောင်း
GERD (1) အချဉ်ရည် အထက်ဆန်ခြင်း (၁)
History shows သမိုင်း အသုံးဝင်ပုံ
History of Burma မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း
The Grass မြက်ခင်းဟောင်း
Chronic leg ulcer နာတာရှည်ခြေထောက်နာ
Pros and Cons အဆိုးနဲ့အကောင်း၊ အကောင်းနဲ့အဆိုး
Hepatitis C Treatment အသည်းရာင် (စီ) ဘယ်လိုကုသလဲ
Buffalo shoulder ကျွဲပခုံး
Exploring the world of knowledge ပမာသူဖုန်းစား
Genuine History သမိုင်းကောင်းပါစေ
Country doctor တောဆရာဝန် ပြန်ဖြစ်ချင်
3-Kyat spelling ၃ိ တန်သတ်ပုံ
Gray baby syndrome ဂရေးဘေဘီ ဆင်ဒရုမ်း
Brexit (3) ဘရစ်ဇစ် (၃)
A bunch of Relatives ဆွေကြီးမျိုးကြီးဆရာဝန်
International boundary နယ်ခြားမျဉ်း
Brexit (2) ဘရစ်ဇစ် (၂)
I’m not lost, I’m on my way ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ မျက်စိလည်...
Brexit (1) ဘရစ်ဇစ် (၁)
Just be patient စိတ်ရှည်လိုက်ပါဆရာ
Email signature ထန်းခေါက်ဖါ
Permanent Tattoo ပါမင့်နင့်တက်တူး ထိုးထားသူများ
Happy National Pink Day ပန်းရောင်နေ့
Folded hands လက်အုပ်ချီခြင်း
Left and Right လက်ဝဲ-လက်ယာ
Kissing ulcer အနမ်းနာ
The Weapon ကျည်ဆန်ထွက်မှ လက်နက်မဟုတ်ပါ
World Order ဝါးလ်အော်ဒါ (သို့) နှစ်တောင်တကိုက်
Remain or Leave တွက်ရေးနဲ့ စက်သူဋ္ဌေး
Tongue Class ဗူးသီးကြော်စကား
Stilwell Road (or) Greedy Spider စတီးဝဲလ်လမ်းမကြီး...
Footwear doctor ဖိနပ်စီးတဲ့ဆရာဝန်
Liver diseases အသည်းရောင်ရောဂါများ
The First ဦးဆုံးရောက်သူ ပဌမ
Aloof ကျွန်တော်မပါ သူတို့ချည်းသာ
Open House ကြည့်ချင်ပွဲ
How to overpower မင်္ဂလသုတ်
Diseases fromaToilet ရေအိမ်သာမှာ ဘာသတိထားရမလဲ
Old Books ခြစားနေတဲ့စာအုပ်များ
Bad Questions မေးကားမေး၏ မတတ်
Drawn ချောင်းထဲနစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစာ
Blog Rules ဂန္တဝင် မတွင်မယ့်စာ
Old and New အမှန်နဲ့ ပြောင်းပြန်၏ ခြားနားချက်
Peacock (Peafowl) ဥဒေါင်းသည် အလွန်လှပသော ငှက်ကြီးတ...
Missing Events မရောက်ဖြစ်တဲ့ပွဲ
Pro-Life and Pro-Choice အသက် နဲ့ အဖျက်
My Kinsfolks အမျိုးတွေ
Thank you very much KK
Two breeds of Comments ကွန်မင့်နှစ်မျိုး
My father ကျွန်တော့်အဖေ
Happy Birthday and Happy Father’s Day
မိတ်ဆွေများ သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၂)
အနုပညာ (သို့) ပြားချပ်နေသော ကမ္ဘာကြီး
Follow suit အမှားနောက် လိုက်ကြမှာလား
Sino-Burmese wars တရုပ်-မြန်မာစစ်ပွဲများ
Thai-Burma ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ယှဉ်ကြည့်တာ
Mongol and Mughal (မွန်ဂို) နဲ့ (မူဂေါလ်)
Happy Birthdays ဒေါ်စုမွေးနေ့များ
Medicines for kids ကလေးသုံးဆေးများ
Blame Me မက်ကလောင် နှင့် သေ-မသေ ဖြေရှင်းချက်
Coughing ချောင်းဆိုးတာ ရောဂါမဟုတ်ပါ
Triple Remedy ဆေးသုံးမယ်